nepal bank limited(nepal bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नेप्से कर्मचारीले यसरी थर्काइन् १६ वर्षअघि किनेको नेपाल बैंकको सेयर नपाएका पीडितलाई
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । १६ वर्षअघि दोस्रो बजारबाट नेपाल बैंकको सेयर खरिद गरेका धरानका मनिस लोहियालाई न्याय दिलाउने वचन दिएका सम्बद्ध पक्षहरु नै तर्किन थालेका छन् । उनलाई न्याय दिने सम्बद्ध पक्षमध्येको एक नेपाल बैंकले यसअघि नै संचालक समितिमा यो मुद्धा उठाएर न्याय दिलाइने भने पनि अझै झारा टार्ने काम गरिरहेको छ । बैंकका कम्पनी...
नेपाल बैंकले ५०% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, नाफा र इपीएसमा भने गिरावट
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ६२ करोड वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले एफपीओ जारी गरेपछि जम्मा भएको सेयर प्रिमियमलाई समेत हिसाब गर्ने हो र अहिलेको वितरणयोग्य मुनाफा चौथो त्रैमासमा समेत कायम हुने र नियामकीय व्यवस्थाका लागि थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेमा नेपाल बैंकले...
नेपाल बैंकको ‘समृद्ध नेपाल अभियान बचत खाता’ खोल्न झुम्मिए सर्वसाधारण, पहिलो दिन नै ७ सय खाता खुल्यो
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेडले नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा र वित्तिय समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हालै ल्याएको ‘समृद्धिसँगै जोडौं नाता: सबै नेपालीको बैंक खाता’ नाराका साथ शुभारम्भ गरिएको खोलौं खाता अभियानलाई सफल गराउन विशेषः संस्थागत पहल अघि बढाएको छ । यो क्रममा नव वर्ष २०७६ को उपलक्षमा दिइएको सार्वजनिक विदाको दिन...
नेप्से उपप्रबन्धकले ब्रोकरलाई जोगाउन खोज्दा लगानीकर्तामाथि यति ठूलो अन्याय ?
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । धरानका मनिस लोहियाले विगत १६ वर्षअघि किनेको नेपाल बैंक लिमिटेडको ७ सय कित्ता सेयरको मुद्धा टुङ्गिने भएको छ । नेपाल बैंकका कम्पनी सचिव केशवप्रसाद भण्डारीले एकहप्ताभित्रै बोर्ड बैठकमा लोहियाको मुद्धा पेश गरी टुंग्याइदिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । लोहिया धरानबाट काठमाण्डौ आई ३ साताअघि नेपाल बैंकको ७ सय...
नेपाल बैंक छाड्दै गर्दा देवेन्द्रप्रताप शाहको भावुक सम्बोधन-'तपाईलाई दुखाएँ हुँला, सरी !'
नेपाल बैंकका साथीहरु, म चार वर्षका लागि तपाईहरुको सीइओको रुपमा नियुक्त भएको थिएँ, यो कुरा यहाँहरुलाई विदितै थियो । मेरो कार्यकाल हिजो(चैत ११) गतेदेखि सकिएको छ । मेरो करिअर र नेपाल बैंकको इतिहासको एउटा च्याप्टर बन्द भएको मैले महसुस गरेको छु र आजदेखि नै नयाँ च्याप्टरको सुरुवात पनि भएको छ । इमानदार भएर भन्नुपर्दा मलाई आज बैंक...
काठमाण्डौ । मुलुककै पहिलो बैंक, नेपाल बैंक लिमीटेडले धादिङको धादिङबेसीमा शाखा बिस्तारसँगै औपचारिक रुपमा कारोबार थालेको छ । एक समारोहका बीच बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी र नेपाल बैक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहले सो शाखाको संयुक्त उद्घाटन गरे । सो अवसरमा बैकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले...
द्वन्द्वकालमा विस्थापित नेपाल बैंकको शाखा २० वर्षपछि पुनरस्थापित
काठमाण्डौ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित एक शाखा नेपाल बैंकले २ दशकपछि पुनस्र्थापना गरेको छ । नेपाल बैंक लिमीटेडले प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत रुपन्देही जिल्ला सैनामैना न.पा.वडानम्बर ३ मुर्गियामा शाखा पुनस्र्थापना गरेको हो । बैंकका प्रेस संयोजक मुकुन्द अर्यालका अनुसार यो शाखा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कमजोर शान्ति सुरक्षाको...
नेपाल बैंक: फ्री प्रफिट र इपीएसमा गिरावट, रिजर्बमा २८९% को छलाङ
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा खासै राम्रो प्रगति गरेन । यसअघिका केही त्रैमासहरुमा निकै राम्रोे प्रगति गरेको बैंक सुस्ताउन थालेको देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकको अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा फ्री प्रफिट घटेको छ भने खूद नाफामा न्यून प्रगति भएको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ६३ करोड...
नेपाल बैंकमा ४.५२% ब्याजमै कर्जा पाइनेः कसले र कसरी पाउँछ ?
काठमाण्डौ ।'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि-२०७५' अनुसार नेपाल बैंकले पनि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको छ । यो बैंकले ४.५२ प्रतिशत ब्याजदरमै सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने स्किम सार्वजनिक गरेको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि भदौ २१ गतेको...
यो वर्ष लाभांश नदिने नेपाल बैंकको निश्कर्ष, लगानीकर्ता फसे
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमीटेडको संचालक समिति आम लगानीकर्ताहरुको लामो समयदेखिको अपेक्षाविपरीत यो वर्ष लाभांश नदिने निश्कर्षमा पुगेको छ । बैंकका एक उच्च अधिकारीले बिजशालासँग कुरा गर्दै यो पटक नेपाल बैंकले लाभांश दिनसक्ने संभावना लगभग सकिएको पुष्टि गरेका हुन् । ‘संचालकहरुबीच यो वर्ष लाभांश नदिने विषयमा सहमति भएको छ ।’ ती...
काठमाडौँ । ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न इजरायल सरकार सकारात्मक देखिएको छ । नेपाली कामदार मिहेनती, इमान्दार र अनुशासित भएका कारण नेपाली कामदारको सङ्ख्या बढाउन इजरायल सरकार सकारात्मक भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग नेपालका लागि इजरायलका राजदूत बेन्नी अमेरले आज...
नेपाल बैंकले एकैदिन ८ स्थानमा शाखा खोल्यो, अबको ध्यान स्मार्ट ब्राञ्चमा
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमीटेडले ८२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा एकैदिन देशका विभिन्न ८ स्थानमा शाखा स्थापना गरेको छ । यसरी स्थापित हुने शाखाहरु प्रदेश १ को विराटचोक (मोरङ), मंगलबारे (ईलाम )पाख्रीवास (धनकुटा ) प्रदेश २ को सर्लाही पर्सा , भवानीपुर (सर्लाही ) वर्दिवास (महोत्तरी ) प्रदेश ३ को दुधौली (सिन्धुली )प्रदेश ४ को आरुङखोला (नवलपरासी ) रहेका...
नेपाल बैंकको खूद नाफा घट्यो, एफपीओका कारण रिजर्बमा ३१२% को छलाङ
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाल बैंक लिमीटेडको खूद नाफा घटेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा नेपाल बैंकको खूद नाफा करिब ६ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म ९७ करोड १३ लाखमा सीमित खूद नाफा घटेर यो वर्ष ९१ करोड ३८ लाखमा सीमित बन्न पुगेको हो । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफातर्फ भने झिनो मात्र...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल बैंकको एफपीओ प्रकरण अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अड्किएको छ । स्रोतकाअनुसार अब म्यानुअल नै गराउने कि अण्डरराईटरहरुलाई नै सकार्न लगाउने भन्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएसँगै नेप्सेको टेबलमा फाईल थन्किएर बसेको छ । नेप्सेस्थित स्रोतले यो बिषयमा एकदुई दिनमै ठोस निर्णय आउने बताए पनि नेप्सेको सिंगो टिम...